सलमान खानको अङ्गालोमा आईट्म गर्ल सुष्मा कार्की – Puleso
सलमान खानको अङ्गालोमा आईट्म गर्ल सुष्मा कार्की
By:puleso Published Date: बिहिबार, अशोज ५, २०७४
हरिशजङ्ग क्षेत्री/ बलिउडका सुपरस्टार नायक सलमान खानले नेपाली आईट्म गर्ल सुष्मालाई देखेर दङ्ग भएका छन ।
बलिउडका दबंग खान अर्थात सलमान खान अन्तर्राष्ट्रिय शोमा सहभागी हुन परिवारका केहि सदस्य सहित बेलायत पुगेका बेला नेपालकी चर्चित आईटम गर्ल तथा नायिका सुष्मा कार्की संग अकस्मात भेट भएको छ । दुबै जनाको यस अघि परिचय नभए पनि भेटका दौउन दुबै परिचीत भएका छ्न ।
सपिङ्ग गर्नका लागि एउटा सपिङ्ग मलमा पुगेकी सुष्मा त्यहाँ सपिङ्ग गर्दै गर्दा अकस्मात उनको नजर आफुतर्फ आउदै गरेका बलिउडका सलमान खान माथी पर्यो उनी झसङ्ग भईन! के यो सपना त होईन? भनेर आफैंले आफैंलाई चिमोटिन र थाहा भयो उनी बिपना मै रहिछन् । हतार हतार सुष्माले सेल्फी खिच्न आग्रह गरिन सलमानले हुन्छ भन्दै ईसारा गरे र सुष्माले सेल्फी खिचिन । केही नबोली सलमान खान सरासर गए म केही बोल्न नै सकेन सुष्माले बताईन । सुष्माले दङ्ग पर्दै भनिन, सलमानको म एकदमै ठुलो फ्यान भएको र उहाँ सङ्ग भेट्न पाउँदा एकदमै हर्षित भएकी थिए ।तर बोल्न नपरेकोमा एकदमै दुखी पनि भए उनले भनिन ।
म खुशी हुँदै मलको बाहिर मात्र के फेरि सलमान खान आफ्नै अगाडी पाए । हलो भन्दै मलाई बोलाउनु भयो! र आर यु नेपाली? भनेर सोध्नुभयो मैले पनि एस एस भने अनि हामी बीच करिब १० मिनेट कुराहरू भयो । उहाँले मलाई धेरै कुराहरू सोध्नुभयो मैले उहाँलाई धेरै कुरा सोधे साथै उहाँलाई मैले १ मिनेट जति कसिलो हग पनि गरेको सुष्माले बताएकी छिन । सलमानलाई भेट्ने, कुरा गर्ने, हक गर्ने उनका करोडौं फ्यानको सपना हुन्छ, त्यसमा पनि सलमानले आफैंले बोलाएर कुराकानी गर्नु भनेको त्यो मान्छे खास हुनपर्छ जस्तो लाग्छ । म पनि राम्री र खास रहेछु जस्तो लाग्यो जो सलमानको नजरमा परे उहाँ संग १० मिनेट लामो सम्बाद समेत भयो यो मेरा लागी धेरै महत्त्व राख्छ सुष्माले बताईन । साथै सलमाले छुटिने बेला फेरि भेट्छु, भन्नुभएको छ चाडै नै भेट हुन्छ होला भन्दै सुष्माले बिश्वास समेत व्यक्त गरिन । सुष्मा दशैको साङ्गितिक कार्यक्रमका लागी प्रबासी नेपालीहरुको आमनन्त्रणमा बेलायत पुगेका बेला सपनाको राजकुमारलाई अर्थात सपना मान्छे सलमानलाई भेट्दा फुरुङ्ग भएकी छिन् ।
अझै पनि त्यो १० मिनेट सपना जस्तै लागिरहेको सुष्मा बताउँछिन् । सुष्माले आफ्नो फेसबुक मार्फत सलमान संग भएको भेट्का तस्वीर पोष्ट गर्दै ड्रीम ब्वाई सम्म लेख्न भ्याएकी छिन । सुष्माले सलमानलाई भेटेको कुरा र ऊनीहरुका तस्बिरहरुले अहिले नेपाली सिनेमा र नेपाली संचार क्षेत्रमा औधी चर्चा पाईरहेका छ्न।